Sida loo Dejiyo oo wax uga beddelo Boggaga Hore ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loo Dejiyo oo wax uga beddelo Boggaga Hore ee WordPress
Sida loo Dejiyo oo wax uga beddelo Boggaga Hore ee WordPress
Ma ku dhegan tahay sida loo tafatiro bogga guriga ee WordPress? Waxaa laga yaabaa inaad soo iibsatay mawduuc WordPress ah, ku rakibtay, ka dibna la yaabtay sababta aysan ugu muuqan sida saxda ah ee aad ku aragtay horudhaca. Mise waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad ka saarto qaybta blog-ka ee mareegahaaga bogga hoyga?
Bogag-guriyeedka mareegaha macnaheedu waa wax badan marka ay timaado beddelaad. Tani waxay u socotaa saxiixida warsidaha iimaylka, iibka iyo hogaaminta macmiilka. Hase yeeshee, habaynta boggaaga hoyga ee WordPress waxay qaadataa dufan yar oo xusul ah si ay u noqoto mid qumman. Laakiin ha werwerin, dejinta iyo tafatirka boggaaga WordPress waa uun mid ka mid ah hawlaha ugu fudud ee aad la kulmi doonto. Kadib, ka dib markaad ogaato habka caadiga ah dhib kuma yeelan doontid inaad isla hawsha ku dhameysato marar badan shabakadaha mustaqbalka. Haddaba aynu ka shaqayno sidii aad u bedeli lahayd boggaga hoyga ee WordPress!
Goorma ayaad u baahan tahay inaad dejiso oo aad wax ka beddesho boggaaga WordPress?
Marka loo eego sida kanu yahay WordPress, madal blogging ah, balooggaagu wuxuu si toos ah u muujinayaa rakibaadda cusub ee WordPress. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan qoraalladaadii ugu dambeeyay ay ka muuqdaan bogga ugu horreeya ee qof kastaa ku soo degay. Mareegaha qaar, tani aad bay ugu fiican tahay. Kuwa kale, macno uma samaynayso dhinaca suuq-geynta. Tan iyo markii WordPress uu u xuub siibtay dhise shabakad si fiican u wareegsan, shirkaduhu waxay raadinayaan bogag guri oo taagan, halkaasoo ay ku soo bandhigi karaan macluumaadka alaabta, adeegyada iyo dadka ka shaqeeya shirkadda.
Shirkadahaas, balooggu waa qayb ka mid ah qaybta labaad oo ay macaamiishu u socon karaan haddii ay rabaan, ama marka ay ku soo degaan mid ka mid ah qoraallada blogka ee mashiinka raadinta.
Haddaba, taasi waxay keenaysaa su'aasha ah, goorma ayaad rabtaa inaad dejiso oo aad wax ka beddesho boggaaga WordPress?
Hagaag, waqtiga ugu muhiimsan waa marka aadan rabin inaad blog-kaaga hore u soo baxdo. Tani waxay dhacdaa marka aad leedahay qaar ka mid ah yoolalka soo socda:
Kordhi macaamiisha iimaylka
Hel hoggaan badan
Abuur iibyo badan
In badan oo diiradda saaraya adeegyadaada
Markaadan qorsheyneynin inaad leedahay blog gabi ahaanba (sida bogga soo degaya)
Xaalad aanad diyaar u ahayn inaad bilowdo blog
Tafatirka bogga hore waa sheeko gebi ahaanba ka duwan. Ilaa aad si buuxda ugu qanacdo mawduuca iyo qaabaynta caadiga ah ee mawduucaas, fursadaha waxa aad u baahan doontaa inaad wax ka beddesho qaybo ka mid ah mareegahaaga. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad gaarto qaar ka mid ah kuwan soo socda:
Hal ama dhowr dhinac
Hayso habayn menu hagaha oo ka duwan
Midabo cusub, calaamado ama dhinacyo kale oo naqshadeynta
Marka la soo koobo, inta badan isticmaaleyaasha WordPress ayaa ugu yaraan wax ka beddel ku sameeya boggooda hore. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ku daraya bog aan toos ahayn halkii blog-ka, halka kuwa kale ay jecel yihiin inay sii hayaan blog-ka laakiin wali waxay ku daraan dhammaan widgets ay jecel yihiin.
Hadda oo aan fahannay “sababta” ka dambeysa dejinta iyo habeynta boggaaga WordPress, aan sahamno sida loo dhammaystiro hawsha.
Sida loo Dejiyo Bog Joogto ah gudaha WordPress
Sida laga wada hadlay waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad kaga tagto bloggaaga bogga guriga. Laakin haddii aad u janjeerto inaad wax badan ka samayso bogga degista ama aad ku darto slider ama gallery alaabta, u beddelka boggaga hoyga mid taagan ayaa loo baahan yahay. Dhab ahaantii, inta badan mawduucyada premium-ka ee aad iibsatid waxay ku weydiin doonaan inaad isla markiiba u beddesho bog guri oo taagan.
Si aad u bedesho boggaga hoyga ee WordPress ka bilow adigoo furaya dashboardkaaga WordPress oo aad tag Dejinta> Akhrinta. Dooro tab wax-akhrinta si aad u furto dhowr habayn ee boggaaga hore.
Raadi Bandhigyada Boggaga Hoyga qaybta si aad u aragto waxa dhabta ah ee website-kaagu hadda ka muuqdo bogga hoyga. Fursadaha ayaa ah inay saaran tahay Posts Latest ikhtiyaar ahaan. Si aad u doorato bog ka duwan guji Bogga Joogta ah badhanka raadiyaha si aad u doorato una dejiso boggaaga cusub.
Marka la doorto, WordPress wuxuu daaha ka qaadayaa laba doorasho oo kale oo aad adigu sameyso. Mid ka mid ah ayaa ku weydiinaya bogga aad jeclaan lahayd inaad muujiso adiga oo kale Front Page midda kalena adigaa leh Bogga Boostada. Haddii aad horey u lahayd bogag farabadan oo laga sameeyay mareegahaaga (mararka qaarkood mawduucyadu waxay kuu soo saaraan bogag muhiim ah, ama laga yaabee inaad mar hore soo martay oo aad samaysay boggaga) kaliya hoos u dhaadhac si aad u hesho boggaga aad rabto.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay inaad hore u abuurtay oo aad daabacday boggagaaga si aad awood ugu yeelato inaad doorato.
Tusaale ahaan, habaynta caadiga ahi waxa ay noqonaysaa in aad u doorato bogga hore ama bogga hore Front Page. Maskaxda ku hay, tani waxay dhammaan ku xiran tahay magacyada aad siiso boggagaaga, sidaas darteed waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba ka duwan adiga.
Waayo, Bogga Boostada, waxaad dooran kartaa bog la yiraahdo Blog ama Posts ama wax kasta oo kale oo aad go'aansatid.
Hit the Keydso Isbedelada badhanka, ka dibna u gudub dhanka hore ee mareegahaaga si aad u aragto sida boggaas taagan uu u noqday boggagagii hore.
Sida Blogga Looga Dhigo Bogga Hore
Dadka qaarkood waxay rabaan oo kaliya inay muujiyaan balooggooda. Waxay aad ugu badan tahay, waad qiyaastay, blogs! Shabakadda ganacsi ee guud waxay u badan tahay inaysan lahaan doonin baloog ahaan boggiisa hore, laakiin degelka u go'ay oo keliya in lagu qoro qoraal ayaa aad ugu dhow inuu rabo maqaalladaas bogga hore.
Sidaa darteed, u tag Dejinta> Akhrinta, dabadeed iska hubi si aad u hubiso in lagu calaamadeeyay qoraaladaadii ugu dambeeyay. Uma baahnid inaad wax ka beddesho doorashada bogga hore ama bogga boostada. Kuwaas waa la bannayn doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, wax ka bedel yar ayaa la samayn karaa iyadoo ku xiran sida aad rabto in bloggaaga uu u muuqdo. Marka hore waa Bogagga Blog-ga ayaa Muujiya Inta badan tiri - tani waa inta qoraal ee la soo bandhigay bog kasta. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad haysato shan ama toban ka mid ah qoraalladaadii ugu dambeeyay ee bogga hoyga. Qaar ka mid ah daabacaado waaweyn ayaa boqolaal dhejis ah ku haya bogga hore, halka baloogyada badankoodu ay xaddidaan tirada. Laakin si kasta oo aad doorato haddii aad hayso qoraalo ka badan lambarka aad rabto in la soo bandhigo balooggaaga ayaa u abuuri doona bogag dheeraad ah qoraalada (tani waxaa loo yaqaannaa pagination). Markaa haddii aad haysato 25 qoraalo oo aad doorato inaad tusto 10 qoraalo boggiiba, balooggaagu wuxuu lahaan doonaa 3 bog oo loo abuuray inuu muujiyo qoraaladaada (waxaad arki kartaa WPExplorer oo leh 75 bog
Ku xiga waa kan Quudinta Syndication waxay Tusaysaa Kii U Danbeeyay tiri. Tan waxa loo isticmaalaa quudinta RSS oo waxay noqon kartaa tiro la mid ah boggaga blog-kaaga, laakiin gabi ahaanba adiga ayay kugu xidhan tahay.
Ugu dambayntii, waxa kale oo aad haysataa go'aan weyn oo aad ka gaadho sida qoraaladaasi u soo bixi doonaan. Doorashadaadu waa Qoraal buuxa iyo Summary. Soo koobiddu waxay siinaysaa isticmaalayaasha fursad ay ku arkaan qoraallo badan oo ku jira dhowr duub oo jiirka ah, waana waxa aan ku isticmaalno WPExplorer. Qoraalka buuxa, si kastaba ha ahaatee, wuxuu muujinayaa kelmad kasta iyo sawir kasta oo ka mid ah qoraal kasta. Sidaa darteed, booqdehu waa in uu u rogrogmadaa inta u dhexeysa boostada koowaad si uu u gaaro kan labaad. Waxaan ku talin lahaa xulashada Kooban, laakiin shabakado badan ayaa leh qoraalka buuxa.
Sida loo sameeyo Menu WordPress ah
Mawduucaaga WordPress waxa laga yaabaa in aanu si toos ah u hirgelin liis nadiif ah. Dhab ahaantii, waxaa laga yaabaa inaadan midna arkin.
Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad tagto Muuqaal> Menus.
Ama dooro menu si aad wax uga beddesho adiga oo ka dooranaya hoos u dhaca ama guji Samee Menu Cusub isku xidhka Iyadoo mawduucaagu laga yaabo inay ku jiraan dhowr menus default ah oo ku jira xogta muunada, abuurista menu cusub ayaa kuu ogolaanaya inaad mid ka sameyso xoq.
Si kastaba ha ahaatee, marka aad abuurto liiskaaga ama aad hesho midka aad jeceshahay, waxaad keeni kartaa si aad u beddesho qaabka. Ka dooro boggaga, dhejiska, qaybaha, tagsyada iyo noocyada boostada gaarka ah si aad ugu darto liiskaaga. Ama waxaad ku dari kartaa xiriiriye khaas ah sida shay menu. Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad u guurto tabka Blog-gaaga wax yar u dhow xagga hore ee liiska, taasoo u oggolaanaysa dadka inay si fudud u arkaan. Waxaad riixi kartaa oo jiidi kartaa shayada menu-ka si aad dib u habeysato ama buul uga dhigto, oo waxaad isticmaashaa ikhtiyaarka tiirka gacanta bidix si aad ugu darto bogag cusub, dhejisyo, qaybo iyo xiriirin gaar ah.
Ka dib marka liiskaaga la habeeyo, hubi inaad doorato goobta Bandhigga oo aad kaydiso. Ama waxaad aadi kartaa Maaree Goobaha tab. Mawduucyada oo dhan waxay leeyihiin meelo menu oo kala duwan, laakiin kuwa ugu caansan badanaa waa Menu Main iyo Menu Footer.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad isticmaasho hoos udhaca si aad u doorato menu aad u sameysay goob kasta. Tusaale ahaan, waxaan rabaa in liiskayga ugu weyn la dhigo goobta Koowaad.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku isticmaali kartaa menu isku mid ah meelo badan.
Sida loo Abuuro Menu gudaha Customizer-ka Tooska ah
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad dejiso oo aad wax ka beddesho boggaaga hore ee WordPress live Customizer. Si aad tan u samayso waxaad u baahan doontaa inaad u guurto Muuqaalka > Habbee marka hore.
Halkan ka dooro menu doorasho.
Kadibna midkood dooro menu-ka baxa si aad wax uga beddesho ama u gujiso Abuur Menu Cusub.
Laga soo bilaabo halkan waxaad isticmaali kartaa +Ku dar walxaha badhanka si aad uga doorato isla boggag, dhejisyo, qaybaha, tagsyada, noocyada boostada gaarka ah iyo fursadaha isku xidhka caadada ah ee laga heli karo muuqaalka> Menus.
Kaliya iska hubi inaad doorato kaaga Meelaha Muuqaalka iyo naadiya menu-kaaga marka la sameeyo.
Fiiro gaar ah: Menus kasta oo aad abuurto oo ku kaydiso hoosta Muuqaal> Menus sidoo kale waxaa laga heli karaa Muuqaalka> Customizer, iyo taa lidkeed.
Fikradaha Tafatirka Bogga Hore ee Dheeraadka ah
Laga soo bilaabo wareegitaanka widgets-ka ilaa habaynta boggaga hore, inta badan aaladaha boggan waxay ku nool yihiin gudaha Imaanshaha tab. Intaa waxaa dheer, Habee tab (hoosta Muuqaalka) ayaa muujinaya dhise muuqaal ah oo ku fiican soo dejinta summada, beddelidda xarfaha iyo doorashada midabadaada.
Ma doonaysaa inaad abuurto Bog-guri gaar ah?
Haddii aad rabto bog guri gaar ah (ama la habeeyey) laakiin mawduucaagu ma bixiyo wax ikhtiyaar ah oo lagu daray si aad u bedesho midabada, xarfaha, qaabka iwm, mar walba waxaad rakibi kartaa plugin. Waxaa jira noocyada ugu muhiimsan ee tifaftirayaasha bogga si loo tixgeliyo.
Haddii aad si fudud u rabto inaad wax ka beddesho walxaha mar hore ku yaal boggaaga guriga markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso WordPress CSS Live Editor plugin. Adigoo isticmaalaya tifaftiraha tooska ah ee CSS waxaad riixi kartaa walxaha oo aad wax ka baddal ku samayn kartaa habaynta walxaha boggaaga. Markaa beddelidda cabbirka farta, wax ka beddelka suufka ama midabbada wax ka beddelka waa neecaw.
Haddii aad rabto inaad dhisto bog guri oo dhammaystiran oo xoq ah, markaa waa inaad eegtaa plugin dhisaha bogga WordPress. Dhisaha sida WPBakery iyo Elementor waxaa ku jira waxyaabo badan oo jiidid & soo jiidasho fudud si aad u qaabayso qaabkaaga. Ama waxaad raaci kartaa mawduuc cusub sida Total kaas oo ay ku jiraan wax-dhisaha jiid-jiididda iyo wax-dhisaha horay loo dhisay si aad u fududayso habaynta.
Astaamaha Muhiimka ah ee Bogga Hoyga
Kahor intaadan bixin, aan sidoo kale si degdeg ah u eegno boggaga guriga laftiisa. Markaad dooranayso mawduuc leh qaab-dhismeedka bogga ama abuurista boggaaga guriga oo xoqan, waxaa jira dhowr astaamood oo muhiim ah oo ay tahay inaad yeelato. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Logo & NavigationBog kasta, oo uu ku jiro boggaaga guriga, waa inuu lahaadaa astaantaada si loo hubiyo in sumaddaadu ay isla markiiba muuqato, iyo menu navigation si si fudud loogu helo boggaga muhiimka ah ee boggaaga.
Madaxa: Bog-guriyeedka waxa waxtar leh in aad leedahay cinwaan si degdeg ah ugu sheegaya booqdayaasha waxa boggaagu ku saabsan yahay. Waa inay ahaataa mid gaaban oo macaan. Waxaad had iyo jeer ku dari kartaa cinwaan-hoosaad si faahfaahsan u sii socda.
Content MainHilibka dhabta ah ee bog kasta waa waxa ku jira. Iyada oo ku xidhan mareegahaaga tani way kala duwanaan doontaa. Tusaale ahaan, balooggu waxa laga yaabaa inuu lahaado qoraalo u dambeeyay iyo foomka saxeexa warsidaha. Goobta ganacsigu waxa laga yaabaa inay soo bandhigto Wicitaan Ficil, caddayn bulsho iyo wax soo saar. Ama qof madax-bannaan ayaa laga yaabaa inuu ku daro muunad ka mid ah faylalka ay ku jiraan oo ay la socoto caddaynta macaamiisha.
Footer: Dambe waa cag. Tani waa meel fiican oo lagu daro isku xirka bogga waxtarka leh, foomka warside-ka, xiriirinta bulshada ama macluumaadka goobtaada.
Kuwani waa 4 qaybood oo waaweyn, dabcan waxaad ku dari kartaa wax badan iyadoo ku xiran baahidaada gaarka ah. Waxaa jira mawduucyo aad u fiican iyo plugins kuwaas oo bixiya ikhtiyaarrada meelaha xayeysiiska ah, baararka ogeysiiska, ganacsiga e-commerce, quudinta Instagram, foomamka optin-ka ee soo booda iyo tan kale oo badan.
Diyaar ma u tahay inaad dejiso oo aad wax ka beddesho boggaaga WordPress?
Mararka qaarkood waxaad dareemeysaa in boggaga internetka uu jabay ama aad sameyneyso wax qalad ah, laakiin taasi waa xaalad. Badana waxaad ogaan doontaa in hagaajinta degdega ah ee bandhiga bogga hore ay khiyaano tahay. Waxaan rajeyneynaa, inaad tan u heshay mid waxtar u leh dejinta iyo habeynta boggaaga WordPress. Noogu sheeg faallooyinka haddii aad wax su'aalo ah ka qabto beddelka boggaaga WordPress.
Waa maxay sababta SEO-yada ay tahay inay daneeyaan astaanta